Mahwendefa emafriji → Zvipfeko zvezvitoro zvinotonhora • P & M machira emakomputa
zvivakwa furiza zvipfeko zvakatsaurirwa kushanda mumamiriro ezvinhu apo tembiricha inodonha kusvika -40 madigiri C. Izvi zvigadzirwa zvemhando yepamusoro, zvakasonerwa nekungwarira kukuru, izvo zvakatoratidzira pachavo mumakambani mazhinji. Vanoongwa nekushanda kwavo, ivo vanosarudzwa nevatengi vanobva munyika dzakasiyana siyana. Kazhinji inotengwa musanganiswa ne shangu uye magurovhosi. Isu tinokurudzirawo zvipfeko zvemukati zvinodziyaizvo zvinozadzisa zvakakwana kudzivirira kwemuviri kumatunhu akadzikira.
Coldstore CS-12 inotonhora chitoro chivharo
Professional freezer inovhara nezvitupa
At pm.com.pl, isu tinopa nyanzvi yefriji uye inotonhorera zvitoro zvekuvhara, zvinozivikanwa nekushanda uye dhizaini yazvino. Iyo yakakurumbira modhi ndeye Coldstore CS-12 kuve nechokwadi chekuchengetedzeka uye kugadzikana kwebasa nekuchengetedzeka kwepamusoro.
Iyo-chidimbu swimsuit ine inoratidzira mitsetse yekuona kuri nani.
Iyi modhi ine zipi mumakumbo uye hafu-magurovhosi pane mockups. Chipfeko chakabata setifiketiKutenda kwazvinogona kushandiswa munzvimbo dzinotonhora kusvika -40 degrees Celsius, ichidzivirira pakubata uye kutonhodza kutonhora. Iyo Coldstore CS-12 modhi ine inofema polyester yekunze jira ine tsvina- uye mvura-inodzinga zvinhu. Kubva pane iyo COLDSTROE nhevedzano, isu tinopawo iyo COLDSTORE CS10 bhachi uye iyo COLDSTORE CS11 bhurugwa.
Inodzivirira inovhara mafiriji kana makamuri anotonhora HI-GLO 40 dziviriro kusvika ku -83,3 ° C
Professional assortment yemakambani ehunyanzvi
Iwo mamodheru atinopa ane tsananguro dzakadzama. Uye zvakare, mune iyo Hi-Glo 40 modhi, isu takapa chitupa chinosimbisa kutevedzera iyo UNE-EN 342: 2004 / AC: 2008 standard. Iyo yakataurwa modhi ine 340 g yekudziya kwekupisa, iyo yekunze zvinhu ndeye nylon, uye mukati inogadzirwa ne polyester, nepo kora ine 280 g yemedehwe polyester. Vatengi vanogona kutarisa kuti zvigadzirwa zvakagadzirwa nei, tembiricha yakadii uye nei huremu hwechigadzirwa. Masutu akagadzirwa kuitira kuti agone kushandiswa kweanoverengeka makore uye haatadzise kufamba pabasa zvakanyanya.
Kana usina chokwadi, ndokumbira ubate dhipatimendi rebasa revatengi, ndiani angave anofara kukubatsira iwe kusarudza mbatya dzakakodzera dzefriji nechitoro chinotonhora. Isu tinopawo mabhachi, bhurugwa, shangu, magirovhosi.
imba inotonhora inovharasutu yekushisa kwakadzikahovhorosi yechandochivharo chekuvhara kusvika - 40 madhigiriiyunifomu yekuchengetedzasutu yebasafiriji hovhorosiColdstore inovharaHi-Glo masutumafiriji akafukidzwainotonhora chitoro yakatarwainotonhora chitoro yakatarwachando chitoro sutuchando chitoro chekupfekasutu yekudzivirira